Gudoomiyaha La-dagalanka Qaadka Abuukar Cawaale oo lagu soo dhaweeyay Boosaaso (Sawirro) – Radio Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminayo Gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Abuukar Cawaale ”Qaaddiid” ayaa maanta lagu soo dhaweeyay degmada Carmo oo ka tirsan Gobalka Bari, halkaasoo markii danbe uu kulan kula qaatay mamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka Carmo.
Kulankan oo ka dhacay bartamaha magaalada ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo la xariira dhibaatooyinka uu qaadku ku hayo shacabka soomaaliyeed,waxana sidoo kale goobta ka hadlay dhowr qof oo horey qaadka u cuni-jiray kuna dhawaaqay inay ka baxeen cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa.
Duqa Carmo Maxamed Cali Shire ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay Olalaha la-dagalanka Qaadka ee uu Abuukar Cawaale ka wado deegaanadda Puntland, wuxuna sheegay Shire inay ka go’antahay sidii dadka looga wacyi galin ahaa khataraha uu qaadku sababo oo ay ka mid yihiin bur-burinka qoyska iyo dib u dhac ku yimaada nolasha dadka.
Qaar ka mid ah haweenka iyo Odayaasha Carmo oo kulankan ka hadlay ayaa ajiibay fariinta la-dagalanka qaadka, waxeyna balan ku qaadeen inay inta awoodooda ah dadka ka wacyi galin doonana isla markasna u sheegi doonaan dhibaatooyinka uu xambaarsan yahay.
Abuukar Cawaale Qaaddiid ayaa u mahad celiyay maamulka iyo shacabka Carmo,wuxuna sheegay inay aad u farxad galinayso dadkii goobta kaga dhawaaqay inay joojnayaan cunista qaadka kuwaasoo qaarkood cunayay in ka badan 20-sano, sidoo kale wuxuu soo dhaweeyay qaad faro badan oo isla goobta lagu gubay, taasoo tusaale u ah sida shacabka Carmo u diidanyihiin ka ganacsiga iyo cunista qaadka.
Intaasi ka dib wafdiga Qaaddiid ayaa u soo kacay dhanka magaalada Boosaaso, waxana duleedkeeda ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka socda Jaamacadda Bariga Africa Boosaaso, Mu’asasada Al-Minjaah,Shirkadda isgaarsiinta Golis iyo Ardayda Jaamacadda Bariga Africa.
Gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Bariga Africa, Shiikh Maxamed Maxamuud Ciise, Gudoomiyaha Al-Minhaaj Bari, mas’uuliyiin ka socday Golis ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin Imaanshaha Qaaddiid ee magaalada Boosaaso, dhanka kale waxey tilmaameen inay garab taaganyihiin Olalaha la-dagalanka Qaadka oo hada ka bilowday Puntland.
Shirar kala duwan oo looga hadlayo aafooyinka Qaadka ayaa lagu wadaa in lagu qabto magaalada Boosaaso ee xarunta Gobalka Bari.